Intrace: Visual Traceroute | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အသုံးအဆောင်များ Apps ကပ » Intrace: Visual Traceroute
Intrace: Visual Traceroute APK ကို
Android အတွက် Intrace Visual Traceroute သင်ကမ္ဘာတဝှမ်းတည်ရှိသောဆာဗာများပေါ်တွင်သင့်ရဲ့ Android device မှဒေတာများလွှဲပြောင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်ခြေရာကောက်ကူညီပေးသည်သည့်စွယ်စုံ app ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဝင်ရောက် website တစ်ခု, တစ်ဦးဒိုမိန်းသို့မဟုတ်ယင်း၏အိုင်ပီ directly.Visual traceroute မဆိုဒေတာလမ်းကြောင်းကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကလွယ်ကူစေသည်ဖြစ်စေခြင်းအားဖြင့်သင့်စက်ကိရိယာနှင့်မဆိုအင်တာနက်ကို server ကြားရှိဒေတာ packets တွေကိုများ၏လမ်းကြောင်းကိုသိနိုငျသညျ။ ဤကွန်ယက် utility ကိုသင့်ရဲ့ဒေတာကိုအောင်မြင်ပြီးသောမှတဆင့်ကွန်ပျူတာနှင့်ဆာဗာများ, အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးစွမ်းသည်။ Android အတွက် Visual traceroute လမ်းကိုပြသထားတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းမြေပုံပေါ်တွင်ဖြတ်သန်း၏လုပ်ငန်းစဉ်ပြသာ။ တနည်းအားဖြင့် Android အတွက် Intrace အဆိုပါဆာဗာ၏လိပ်စာများနှင့်၎င်းတို့၏တည်နေရာပြသထားတယ်။
• Host ကအမည်အား
Android အတွက် Intrace အများဆုံး devices များ (စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်, Laptop, PC များ, etc) အပေါ်များသောအားဖြင့်ရရှိနိုင်သောတိကျတဲ့ "ping ရဲ့" command ကိုအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါ application ကိုဒေတာဘေ့စသင်ဂီယာ packet ကိုအချက်အလက်များ၏လမ်းအပေါင်းတို့၏ပထဝီတည်နေရာကိုဖေါ်ထုတ်ကူညီပေးသည်။
အမြင်အာရုံ tracert နဲ့တူ Network မှ tools များကွန်ရက်ကအင်ဂျင်နီယာများနှင့် site အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအဘို့ကြီးသောဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်လည်း Android အတွက်အမြင်အာရုံသဲလွန်စလမ်းကြောင်းကသူတို့အသွားအလာစစ်ဆေးချင်ပါတယ်တဲ့သူအသုံးပြုသူများအတွက်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ application ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား? အဆင့်သတ်မှတ်ပေးပါ!
သင့်ရဲ့ရမှတ် Intrace ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်
ကွန်ယက်မန်နေဂျာ - …
Net က Optimizer & ...